Njani i $ 250 ye-Erotic Massage ekhokelele kwisiphelo esimangalisayo - Impilo
Eyona Impilo Njani i $ 250 ye-Erotic Massage ekhokelele kwisiphelo esimangalisayo
Njani i $ 250 ye-Erotic Massage ekhokelele kwisiphelo esimangalisayo
U-Ellie uqhawula umtshato nomyeni wakhe, uNate, owanikezela ngamandla akhe kwizinto ezininzi zokuzonwabisa kunaye. UNate ufudukele kwirente iTribeca, kwaye ngoku uchitha iveki eFlorida kwinkampu yentenetya.
Usisipho, uyachaza, ebhekisa kumasseur wakhe. UMandy, owazisa uEllie, kwaye nditshintshiwe. U-Ellie, okhumbula u-Auntie Mame oselula, uhleli kwisitulo sakhe esibomvu sika-Louis XIV, ilokhwe yakhe emdaka ka-Lanvin efake ingubo yakhe efafaza iingalo. Usike iinwele zakhe ezimnyama kwi-pixie kwaye abaleke iminwe yakhe kuyo ukuva okushiyekileyo. Ukwenza ukuba ufune ukwenza izinto eziphambeneyo njengokucheba iinwele zakho okanye ukuphulula amalungu esini phakathi kwisidlo sangokuhlwa kwigumbi lokuhlambela laseBilboquet.
Kwaye kwakungekho krwada? Ndiyabuza.
Ewe, nguwe obiza izithonga. Umxelela ukuba ufuna nini kwaye phi.
Ubiza malini? Ndinomdla nje.
$ 250 ngeyure, kodwa angakunika isivumelwano.
UMandy unjalo. Ucinezela ukufumana ezinye iinkcukacha.
Uqale ukundiphulula emqolo nasemagxeni ngeoyile, utshilo uEllie, ephunga ivodka.
Ioli eshushu? Ndiyabuza.
Ubushushu begumbi, u-Ellie uyaqhubeka. Emva koko uphakamise iingalo zam wamassage ngamabele, ecwina iingono zam. Yaziva iphambene.
UMandy ungqiyame phambili xa umdlalo-ngokudlala uqhubeka: Uoyile imilenze yam, wayifaka indlela yakhe kufutshane nehlathi lam. Emva koko, endijikelezisa, ethe chu umnwe ophakathi kum.
Imemori yokuthanjiswa okunomdla u-Ellie. Uyanyanzelisa uMandy kwaye ndizama uTomaso ngokuhlwanje. Ndothuka kakhulu, kwenzeka nje ukuba agqibe idinga nge-71st kunye nePaki kwaye uyakube ephelile kwimizuzu engama-45. Kukunyanga kuka-Ellie. Kwaye hayi, ayothusi into yokwabelana noTomaso, kuba akaziva enjalo ngaye. Umbona njengomphilisi.
Nokuba uMandy, i-orgasm yokuhamba, ubonakala esoyika. Ucaca malunga neyakhe, uvuthondaba olungenanjongo, olwenzeke kwinyanga ephelileyo emva kweseshoni yokuphumla yokuthambisa. Indoda emnandi, enebhali, ebhinelwe imbiza ibeke ifolokhwe eshukumayo eshukumayo kuye ngamnye chakras ukulungelelanisa amandla akhe emva kokukhupha isisu, kwaye xa ifike ngokuqinileyo kwiingcambu zakhe chakra , kwaqhuma i-orgasm enkulu.
Kuya kufuneka sisebenzise ilungelo lobunikazi lokufaka ifolokhwe njengento yokudlala ngesondo, uhleka uEllie.
Kanye ngexesha elifanelekileyo, uTomaso uyafika. Uye ngqo ekuphoseni i-porno: uthixo wase-Italiya ophakathi kwiminyaka ye-30 enetafile enkulu yokusonga phantsi kwengalo yakhe yemisipha. Ndibamba amehlo akhe amdaka kwaye ndithintele ukujonga kwam. Mhlawumbi kufuneka ndivumele inkululeko engakumbi yesondo? Ngaba isidingo sam sokuhlala ndiziva ndikhuselekile kwaye ndiyithatha kancinci, ngokobubhanxa besizwe?
Ngokukhawuleza isiqingatha sam sihamba ngesisu phantsi kwetawuli. UTomaso ulilungisile igumbi ngevumba lomthi wePalo Santo, endiwuqondayo kwiklasi yeyoga. Amaza olwandle athambileyo aphuma kwi-iPhone yakhe 6. Ndiyabhabha.
Xa ndisiva izandla zakhe ezishushu emqolo wam, ngokwendalo ndigqiba kwelokuba lelona xesha lokumgculela ngemibuzo. Kwisithuba semizuzu emihlanu, ndifumanisa ukuba uvela eMilan, a IKundalini Ingcali, ihlala eWilliamsburg, ine-retriever egolide egama linguMichelangelo (kunjalo), uSkypes rhoqo noMama, unomdade omncinci eLondon kwaye undwendwela usapho lwakhe minyaka le ePalermo apho utata wakhe egcina isikhephe. Ewe, ebekhe waya eCapri, kodwa ngenxa yokuba isiba kukhenketho ehlotyeni…
Uxinekile kakhulu. Uyeke uvalo lwam luhlasele. Zama ukuphumla. UTomaso wayefana nothixo wamaGrike.
Ndibambe umphefumlo wam njengoko iminwe yakhe isondela kumncinci womqolo wam. Amehlo am avulekile kwaye ndiva intsini kaMandy engacacanga kwelinye igumbi. Kukho ukungxola esifubeni nasemqaleni, ngaphandle kwesikhokelo, imvakalelo ekhathazayo engenabume. Imfama kwaye indala ihleli kum, njengenyoka ebhijelweyo.
Izandla zakhe zirhangqe ithanga lam kwaye ukubamba kwakhe kuthambile. Ndiyaqala ukuziva ndiphakathi kwemilenze yam, kodwa olu lindelo lubanjiswe luloyiko. Kuya kufuneka ukuba kube siseti, ilele ngesisu kunye nendoda phezu kwam, ndisazi ukuba izakuya apho kuba ndiyicelile.
Izandla zakhe ziyanqumama. Ndifumana ukuphefumla kwam kwaye nantso kwakhona, igcwele ngumsindo.
Ayiloxanduva lwakho ukuyibamba, uyandixelela, wayeyingcuka kwaye wawuyinyanga awayengenakuba nayo.
Inyoka iyaqhekeza kwaye ibize ulwimi lwayo olude ukusuka emqaleni wam. Kude kube kuthanjiswa, bendingekacingi yena kwiminyaka.
Ingaba wazi kanjani? Ndijike, ndambuza ngeenyembezi, ibingeyonto inkulu kangako. Khange andange. Khange abeke neminwe yakhe kum.
Ndixelele abambalwa amantombazana am kwaye ndiqhula kwakuyi-molestation-lite. Ndandineminyaka eyi-15 kwaye wayengumnyangi wam emzimbeni okanye njengoko ndithanda ukumbiza ngokuba ngumzimba wam umdlwenguli . Ndonzakele, ndinemisipha eqwengayo evela kumdlalo wokutyibilika emanzini, kwaye wayefanele ukundinceda. Uthembise ngokundibuyisela emkhenkceni kwaye wanika utata wam isivumelwano.
Wayendenza ukuba ndihambe ndibheka ngapha nangapha ukujonga ulungelelwaniso lwesango lam.
Musa ukuzulazula njengomzekelo, wagxuma.
Xa wayeya kuba nam ndedwa egumbini, wayedla ngokufaka ii-ultrasound zam zokuqaqamba kwam aze asondele kakhulu.
Ngaba uyazichukumisa? wake wabuza.
Kuya kufuneka uziphulula ngoluhlobo, wagijimisa iminwe yakhe ethangeni lam eliphezulu, ngoku ndibonise ukuba uyenza njani.
Ndiyayithanda lento? Ndibuze kuba ndifuna ukuyifumana kakuhle.
Kwiseshoni yethu yokugqibela, uthathe isigqibo sokundinika uvavanyo lwebele. Andikhumbuli ukuqiqa, kodwa ngethamsanqa yayingaphezulu kwesikipa sam sePacker High School. Kuthi xibilili kum, uxele ukuba ziqhelekile.
Ndihleli ndatsala amadolo wam esifubeni. Wazisonga iingalo zakhe emzimbeni wam ojijekileyo kwaye wahlebeza kabuhlungu, Ungakhathazeki, ndiza kukwenzela ngcono.
Kodwa andisamkholelwa. Ndifikile ekhaya ndaxelela uTata andiphindi ndibuyele apho futhi. Ubuzile ukuba kutheni kodwa bendingazi ukuba ndimxelele njani.
Eyona nto indikhathazayo, nangona kunjalo, yiminyaka emininzi bendisoloko ndihlaziya amalungu esini. Ndikwelo gumbi linye kwaye ndina-15 kwaye andazi bhetele. Undixelela ukuba ndizichukumise kwaye uza kundiphilisa angaxeleli mntu. Kwaye yindlela andijonga ngayo xa endigezela, ngokungathi uzakunditshica, oko kundityhalela ngaphaya komphetho.
Le fantasy yayilawulwa ndim ngokupheleleyo, ikhokelwa ndim, kwaye yayingumnikazi wam de ndayilahla ngaphandle kuba ndingasayifuni. Iyahlekisa indlela ezitshintsha ngayo iingcinga kuba ngoku xa ndicinga ngaye nge-oyile yakhe, amadevu amnyama, ndizibona sendimbetha ebusweni.
UTomaso ubeka isandla sam esiswini sam, esinye entliziyweni yam phezu kwetawuli.
Ukujonga phezulu kuye, andicingi ukuba ndikwimeko yento, uyazi, inxenye yesini.
Ndiyazi. Undincumele. Akukho nxalenye inomdla.
UTomaso, isipho ye-Upper East Side inomdla wokuphilisa okwenene. Uyayazi indlela yokufunda umzimba womfazi. Kwabaninzi, unokulila i-tiger yangaphakathi elambileyo, kodwa kum, wakuqonda ukuthandabuza kwam kunye nemfuno yemida. Kwakukwinto yokuthetha kwam, hayi ukuba ndingavulela ubumsulwa kunye nokhuseleko lomzuzu kwaye ndiphumle.
I-Trump ye-State of the Union Idilesi yaQinisa njani ngokuPhendula kuka-Stacey Abrams?
UMichael Dweck Ubambe i-Montauk's Allure ehlala ihleli, Gqibezela ngokuKhangela uhamba ze
'Ukuyilahla' Ixesha lokugqibela le-GIF-Cap: I-Karma's Bitch
USarah Jessica Parker Khange akuncede kodwa Aphinde aHlolele indawo eyaziwa ngokuba yi 'SATC'
jack ixesha lokuhamba
albhamu entsha 2016 hip hop
ungantoni umthi wokunika malunga
Iimveliso zokukhula kweenwele ezikalwe kuqala
walt disney amatikiti epaki yehlabathi
adam amanxiwa yonke into enkulu ukuzingela umdlalo
phezulu 10 free ukuthandana isayithi